I-Microsoft OneDrive manje isebenza ngokomdabu kuma-M1 Macs | ngivela ku-mac
I-Microsoft OneDrive manje isebenza ngokwemvelo kuma-M1 Mac
UManuel Alonso | | Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac
emva koyedwa linda inyanga Njengoba inguqulo ye-beta ye-OneDrive ye-Macs ene-M1 yakhululwa, sesivele sinalo uhlelo lokusebenza olutholakala ngokugcwele kubasebenzisi. I-Microsoft isigcinile isithembiso sayo futhi ibuyekeze i-OneDrive ngochungechunge lwentuthuko ye-Mac kodwa ne-iPhone ne-iPad. Kodwa Ama-Mac ikakhulukazi athola ukuthuthuka okukhulu mayelana nolwazi lomsebenzisi nokuzinza. Okuhle ukuthi i-iOS ithola ukufinyeleleka okungcono. Njengoba bethi Win-Win.
I-Mac OneDrive entsha inikeza ulwazi olungcono lomsebenzisi, ukuhambisana okuthuthukisiwe kohlelo lokusebenza, futhi ivikeleke kakhulu futhi isebenziseka kalula kunezinguqulo zangaphambilini. Le nkampani ithuthele i-OneDrive yaya endaweni ye-Apple yokuhlinzeka ngamafayela, okusho ukuthi isevisi yokugcina i-inthanethi ye-Microsoft 365 isebenza kangcono kakhulu futhi inikeza izici eziningi.
umuzwa omusha Amafayela On-Demand kuma-Mac asebenzisa i-macOS 12.1 noma kamuva, sekuyinto engokoqobo. Ubuchwepheshe obusha obusekelwe ku-platform ye-Apple File Provider buhlanganiswe kangcono nesistimu yokusebenza uma kuqhathaniswa nenguqulo yokuqala. Lokhu kusho umuzwa ongcono womsebenzisi, ukuhambisana okungcono kohlelo lokusebenza, nokuthembeka okungcono. Kodwa futhi ivumela iMicrosoft ukuthi inikeze izici ezintsha, njenge- Known Folder Move.
Isipiliyoni esisha se-Files On-Demand sidinga i-macOS 12.1 noma eyakamuva. Le nguqulo izoba inguqulo yakamuva esekelwe. Lokhu kusho ukuthi amadivayisi azothuthela ngokuzenzakalela ku-Files On Demand entsha ngokushesha nje lapho ethola isibuyekezo se-macOS.
Kancane kancane sibona ukuthi izinhlelo zokusebenza zifinyelela kanjani ukuhambisana kwendabuko namaphrosesa amasha we-Apple. Into ebaluleke kakhulu ukuze lapho abulawayo enza kanjalo ngendlela eshesha kakhulu futhi esebenzisa imali encane kakhulu yamandla, ngaleyo ndlela kuzuzwe ukusebenza kahle okukhulu kanye nempumelelo. Namuhla sinezinhlelo zokusebenza ezimbili esezivele zihambisana, I-DropBox kanye ne-OneDrive.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » I-Microsoft OneDrive manje isebenza ngokwemvelo kuma-M1 Mac
Thatha ithuba lokunikezwa kwe-Apple kwabafundi basekolishi